गुगल एल्गोरिथ्ममा २०० स्तर निर्धारण कारकहरू Martech Zone
मङ्गलबार, जुन 4, 2013 Douglas Karr
ठिक छ, यो कुनै सजिलो काम होइन तर kudos गर्न Backlinko र एकल ग्रेन सँगै राख्नको लागि यो इन्फोग्राफिकको उद्देश्य Google को रैंकिंग एल्गोरिथ्म विच्छेदन गर्नु हो। इन्फोग्राफिक डोमेन कारक, पृष्ठ स्तर कारक, साइट-स्तर कारक, ब्याकलिंक कारक, प्रयोगकर्ता अन्तर्क्रिया, अतिरिक्त संकेतक र सामाजिक संकेतहरूको माध्यमबाट हिँड्छ। किनकी तिनीहरू ए लागू गरिरहेका छैनन् वजन प्रत्येक व्यक्तिगत कारकमा,
म सूची nitpick मा जाँदैछु ... म सबै प्रभाव रैंकिंग विश्वास छैन तर एक अझै क्लिक क्लिक दर को माध्यम ले तपाईंको खोज ईन्जिन प्रदर्शन प्रभाव पार्न सक्दैन। जे भए पनि - यो समीक्षा गर्न र सोच्नको लागी तपाईको सामग्रीलाई अप्टिमाइज गर्नका लागि यो एक ठूलो विस्तृत सूची हो।
AdRoll retargeting को साथ फेसबुक मा रिटार्ट
जुन 4, 2013 मा 10: 18 PM
धेरै व्यापक सूचीकरण। यसले धेरै कुरा प्रकाशमा ल्याउँछ किन एसईओ प्लगइनहरूमा माथिको धेरै जसो तिनीहरूमा एकीकृत हुन्छ। उदाहरण को लागी, SEO प्रेसर। यो "सबै एकै ठाउँमा" रैंकिंग कारकहरूको लागि धन्यवाद।
Webex डाटा समाधान
जुन 4, 2013 मा 11: 17 PM
धेरै रोचक सूची! अद्भुत प्रयास को लागी धन्यवाद
ज्याकलिन किसी मायर्स
जुन 6, 2013 बिहान 7:50 बजे
महान स्रोत डग! मैले बुकमार्क गरेको केहि हुनेछ! साइट स्तर कारक खण्ड अन्तर्गत, डुप्लिकेट सामग्री स्निपेटमा "डुप्लिकेट सामग्री" छ। 🙂 यसलाई ठीक गर्न चाहनुहुन्छ।
जुन 13, 2013 बिहान 7:17 बजे
यो धेरै जानकारीपूर्ण इन्फोग्राफिक को लागी धन्यवाद।
एउटा टिप्पणी (ज्याक्लिनले पहिले नै पोष्ट गरेको कुरा बाहेक): तपाईले "साइटमा समय" अन्तर्गत स्निपेट पनि परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ :)।
सेप्टेम्बर 6, 2013 मा 1: 10 AM
राम्रो इन्फोग्राफिक छवि। यदि सम्भव छ भने, कुञ्जी शब्द प्रयोग गरेर आफ्नो वेबसाइट र यसको URL नाम दिनुहोस्। तपाईंले गर्नुपर्छ
यसलाई तपाइँको वेबसाइटको शीर्षक, विवरण र मेटा ट्यागहरूमा पनि प्रयोग गर्नुहोस्।
कोही भन्छन् कि आजकल गुगलले मेटा ट्यागहरू हेर्दैन
जुलाई,, २०१ at 27::2015। बिहान
अक्टोबर 10, 2015 बिहान 11:48 बजे
वाह मैले भर्खरै यो लेख गुगलमा फेला पारेको छु र म मार्केटिंग टेक ब्लगको लागि धेरै आभारी छु यस्तो उत्कृष्ट इन्फोग्राफको लागि जुन हेरचाह गर्न धेरै सरल छ।